26 Zvino Jobho akapindura, akati: 2 “Haiwa, wave uri rubatsiro rwakadini kumunhu asina simba!Haiwa, waponesa ruoko rusina simba zvakadini!+ 3 Warayira munhu asina uchenjeri zvakadini,+Uye waita kuti uchenjeri hunobatsira huzivikanwe nevazhinji! 4 Ndiani wawaudza mashoko?Mhepo yokufema yabuda mauri ndeyaani? 5 Vaya vasina simba vari murufu vanoramba vachidederaVari pasi pemvura pamwe chete nezviya zvinogara mairi.+ 6 Sheori haina kupfeka pamberi pake,+Nzvimbo yokuparadza haina chokufuka. 7 Anotatamura kuchamhembe panzvimbo isina chinhu,+Achiturika nyika pasina chinhu; 8 Achiputira mvura mumakore ake,+Zvokuti gore gobvu haritsemurwi nayo; 9 Achifukidza chigaro choumambo,Achiwarira gore rake pamusoro pacho.+ 10 Akatara denderedzwa pamusoro pemvura,+Kusvikira kunogumira chiedza murima. 11 Mbiru dzedenga dzinozununguka,Uye dzinoshamiswa nokutuka kwake. 12 Anonyandura gungwa nesimba rake,+Anogura-gura+ mudenhi+ achishandisa kunzwisisa kwake. 13 Anobwinyisa denga nemhepo yake,+Ruoko rwake rwakabaya nyoka inozvongonyoka.+ 14 Tarirai! Aka kanongova kachikamu kadukuduku kenzira dzake,+Uye tinongonzwa zevezeve rokutaura kwake!Asi ndiani anganzwisisa kutinhira kwake kune simba?”+